ဂေဟဗေဒဘုတ်အဖွဲ့၊ Film Faced Plywood - Xinbailin
အစိမ်းရောင် Tect PP အထပ်သား
အနီရောင် ဆောက်လုပ်ရေး ရုပ်ရှင် အထပ်သား မျက်နှာ
Particle Board ၊
ဆောက်လုပ်ရေးသစ်သား formwork ထုတ်လုပ်မှုတွင် 20 နှစ်အတွေ့အကြုံ
ကွန်ကရစ် Formwork Wood Plywood
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာသုံးအထပ်သားသည် တာရှည်ခံကောင်းမွန်ပြီး ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်အပြင် ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပါသည်။အထပ်သားသည် အရည်အသွေးမြင့် ထင်းရှူးနှင့် ယူကလစ်ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး လုံလောက်သောကော်ကိုအသုံးပြုပြီး ကော်ကိုချိန်ညှိရန် ကျွမ်းကျင်သူများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။တူညီသောကော်ဖြီးမှုသေချာစေရန်နှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သုံးထပ်သားကော် ဟင်းချက်သည့်စက် အမျိုးအစားအသစ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ဒါလည်း...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနီရောင် ပျဉ်ပြားသည် ကောင်းမွန်သောကြာရှည်ခံမှု၊ ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး တတ်နိုင်သောကြောင့် 10-18 ကြိမ်အထိ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အဆောက်အအုံ အနီရောင် ပျဉ်သည် အရည်အသွေးမြင့် ထင်းရှူးနှင့် ယူကလစ်ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်၊ အရည်အသွေးမြင့် ကော်/လုံလောက်သော ကော်ကို အသုံးပြုထားပြီး ကော်ချိန်ညှိရန် ကျွမ်းကျင်သူများ တပ်ဆင်ထားသည်။တစ်ထပ်သား ကော်ပြုတ်စက် အမျိုးအစားသစ်ကို တူညီသော ကော်ဖြန်းခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း...
Water-Resistant Green PP ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်သည် Formwork Plywood နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ဤထုတ်ကုန်ကို အထပ်မြင့်စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ၊ ခေါင်မိုးများ၊ ထုပ်တန်းများ၊ နံရံများ၊ ကော်လံများ၊ လှေကားများနှင့် အုတ်မြစ်များ၊ တံတားများနှင့် ဥမင်များ၊ ရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ၊ မိုင်းများ၊ ဆည်များနှင့် မြေအောက်ပရောဂျက်များတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ပလတ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ထားသော အထပ်သားသည် ၎င်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုနှင့် ချွေတာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ရေစိုခံမှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်တို့အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လူကြိုက်များသည့် အသစ်ဖြစ်လာသည်။အကျိုးကျေးဇူး ရှစ်မျိုး 1. ချောမွေ့သန့်ရှင်း...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် PVC အပြင်၊ ၎င်း၏ကုန်ကြမ်းများတွင် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်၊ တည်ငြိမ်ဆေးနှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေစိမ်ခံဘုတ်ပြားကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက်စနစ်၊ စွမ်းရည်မြင့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများကို အပြည့်အစုံထည့်သွင်းထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် core နှင့် မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်အသုံးပြုကာ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သုံးစွဲသူများအား ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ထုတ်ကုန်အသစ်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။လိုအပ်ချက်ရှိနေသရွေ့...
18mm Film Faced Plywood Film Faced Plywood Standard
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 18mm ဖလင်အထပ်သားသည် အရည်အသွေးမြင့် ထင်းရှူးနှင့် ယူကလစ်ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး လုံလောက်သောကော်ကိုအသုံးပြုပြီး ကော်ကိုချိန်ညှိရန် ကျွမ်းကျင်သူများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။တူညီသောကော်ဖြီးမှုသေချာစေရန်နှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သုံးထပ်သားကော် ဟင်းချက်သည့်စက် အမျိုးအစားအသစ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများသည် သိပ္ပံနည်းကျမဟုတ်သော ဘုတ်ပြားနှစ်ထပ်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိစေရန်၊ ပင်မပျဉ်ပြားများ တန်းစီခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံ ချုပ်ရိုးများကြားတွင် ချုပ်ရိုးများကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထင်းရှူးနှင့် ယူကလစ်ပစ္စည်းပါရှိသော အရည်အသွေးမြင့် အနီရောင် ဗီနီယာဘုတ်
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် အနီရောင်ဘုတ်ပြားကို ၂၈ ကြိမ်၊ ဖိနှစ်ကြိမ်၊ စစ်ဆေးခြင်းငါးကြိမ်နှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ တိကျသေချာသော ပုံသေအရှည်ဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ချောမွေ့သောအရောင်နှင့် ယူနီဖောင်းအထူ၊ ကျွတ်ထွက်မှုမရှိခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းကောင်းမွန်ခြင်း၊ အထွက်နှုန်းအားကောင်းခြင်း၊ သက်ရောက်မှုအားကောင်းခြင်း၊ အဆုံးစွန်သော ဆန့်နိုင်အား၊ ပုံပျက်စေခြင်း၊ မာကျောခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်း၊ မီးခံနိုင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော ဂုဏ်သတ္တိများ သာမာန်အသုံးပြုပြီးရင် အလွယ်တကူ အခွံခွာနိုင်ပါတယ်။အတွက် သင့်တော်ပါတယ်...
Super Smooth ရုပ်ရှင် အထပ်သား မျက်နှာ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ဆောက်လုပ်ရေးသစ်သားဖောင်ပုံစံ ကွာခြားချက်ကို ခွဲခြားကြည့်ပါ- ပထမဦးစွာ၊ ထုတ်လုပ်သူသည် ကုန်ကြမ်းများကို အခြောက်ခံရန် နေရာလွတ်ရှိမရှိ ကြည့်ရှုပါ။အလုပ်ရုံတွင် အသုံးမပြုမီ ကုန်ကြမ်းအားလုံးကို အခြောက်ခံရန် လိုအပ်သောကြောင့် အခြောက်လှန်းသော ကုန်ကြမ်းနှင့် အခြောက်လှန်းကုန်ကြမ်းကြား အလေးချိန်ကွာခြားချက်မှာ ၂ တန်ဖြစ်သည်။မယုံနိုင်စရာလို့ထင်ရပေမယ့် slab ထဲက အစိုဓာတ်က ပျော့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ကော်၏ ကပ်ငြိမှု အတိုင်းအတာသည် ...
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် ယေဘုယျအားဖြင့် MDF ကို PVC စုပ်ယူမှု တံခါးပြားများအတွက် အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ပိုမိုအသေးစိတ်အားဖြင့် MDF ကို သိုလှောင်ခန်းများ၊ ဖိနပ်ပုံးများ၊ တံခါးအဖုံးများ၊ ပြတင်းပေါက်အဖုံးများ၊ စကပ်ကြိုးများ စသည်တို့တွင် အသုံးပြုပါသည်။ MDF သည် အိမ်သုံးပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုများစွာရှိပါသည်။၎င်း၏ အားသာချက်များမှာ သိသာထင်ရှားသည်၊၊ MDF ၏ ဖြတ်ကျော်မှုအပိုင်းသည် တူညီသောအရောင်နှင့် တူညီသော အမှုန်အမွှားများ ဖြန့်ဖြူးမှုရှိသည်။မျက်နှာပြင်သည် ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်မှုသည် ရိုးရှင်းပါသည်။တည်ဆောက်ပုံက ကျစ်လျစ်ပြီး ပုံသွင်းနိုင်မှုလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်...
တရုတ်လက်ကား Chipboard မယ်လမင်းစက်ရုံများ - Fresh Water Formwork Film Faced Plywood - Xinbailin
အားသာချက် 1. ကျုံ့ခြင်းမရှိ၊ ရောင်ရမ်းခြင်းမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်အခြေအနေများအောက်တွင် ပုံပျက်သွားခြင်းမရှိ၊ flameproof နှင့် fireproof 2. ခိုင်ခံ့စွာပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ အဆင်ပြေစွာစုဝေးပြီး disassembly၊ အမျိုးအစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို သင့်လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် 3. ၎င်းတွင် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ အင်းဆက်ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်မှု၊ မြင့်မားသော မာကျောမှုနှင့် ခိုင်ခံ့သော တည်ငြိမ်မှု Parameter ပစ္စည်းတန်ဖိုး Item Value Warranty 1 နှစ် Main Material ထင်းရှူး၊ ယူကလစ်ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှု For...
တရုတ်လက်ကားသုံးအထပ်သားအင်္ဂါရပ်များရောင်းချသူများ - ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Black Brazil Faced Plywood - Xinbailin
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် မိုးရေဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘေးဘက်တွင် ကွက်လပ်မရှိပါ။ရေစိမ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းရှိပြီး မျက်နှာပြင်သည် တွန့်လွယ်ခြင်းမရှိပါ။ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကို သာမန် laminated panels များထက် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုရှိသော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အက်ကွဲရန် မလွယ်ကူသလို ပုံပျက်ခြင်းလည်း မရှိပါ။အနက်ရောင်ဖလင်မျက်နှာဖုံး ကာမိန်လွှာများသည် အဓိကအားဖြင့် 1830mm*915mm နှင့် 1220mm*2440mm ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ 8-11အလွှာများ၏ အထူလိုအပ်ချက်အရ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။အလယ်တန်း...
တရုတ်လက်ကား အိမ်သုံးအထပ်သား ထုတ်လုပ်သူများ - မယ်လမင်းမျက်နှာ ကွန်ကရစ်ဖောင်အထပ်သား - Xinbailin
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် မိုးရေဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘေးဘက်တွင် ကွက်လပ်မရှိပါ။ရေစိမ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းရှိပြီး မျက်နှာပြင်သည် တွန့်လွယ်ခြင်းမရှိပါ။ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကို သာမန် laminated panels များထက် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ကြမ်းတမ်းသော ရာသီဥတုရှိသော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အက်ကွဲရန် မလွယ်ကူသလို ပုံပျက်ခြင်းလည်း မရှိပါ။အနက်ရောင်ဖလင်မျက်နှာဖုံး ကာမိန်လွှာများသည် အဓိကအားဖြင့် 1830mm*915mm နှင့် 1220mm*2440mm ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ 8-11အလွှာများ၏ အထူလိုအပ်ချက်အရ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။သာမညပူ...
တရုတ် လက်ကား မယ်လမင်း အထပ်သား စက်ရုံများ - အညိုရောင် ဖလင် မျက်နှာပြု အထပ်သား ဆောက်လုပ်ရေး ပိတ်ခြင်း - Xinbailin
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာသုံးအထပ်သားသည် တာရှည်ခံကောင်းမွန်ပြီး ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်အပြင် ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပါသည်။အထပ်သားသည် အရည်အသွေးမြင့် ထင်းရှူးနှင့် ယူကလစ်ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး လုံလောက်သောကော်ကိုအသုံးပြုပြီး ကော်ကိုချိန်ညှိရန် ကျွမ်းကျင်သူများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။တူညီသောကော်ဖြီးမှုသေချာစေရန်နှင့် ထုတ်ကုန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သုံးထပ်သားကော် ဟင်းချက်စက် အမျိုးအစားအသစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။
Guangxi Guigang Monster Wood Industry Co., Ltd. သည် အကြီးစား အထပ်သားနှင့် အထပ်သား ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် စတုရန်းမီတာ 170000 ကျော်ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီး စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ2သန်းကျော်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာရှင် 66 ဦးရှိပြီး ကျွမ်းကျင်လုပ်သား 200 ခန့်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ- Guangxi Xinbailin International Trade Co.,Ltd.သစ်သားထုတ်ကုန် အမျိုးအစားအားလုံးကို တင်ပို့ခြင်း။ အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများသည် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အာမခံချက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများကို ခေတ်မီအောင် လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 40 ကိုဝယ်ယူထားပြီး နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မှာ 250000 cbm (50000pieces) ဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်များကို အာရှ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ ဥရောပ၊ စသည်တို့သို့ ရောင်းချနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် “အကောင်းဆုံးသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ရန် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ လက်ဖြင့် လက်တွဲ၍ ခမ်းနားသော သစ္စာရှိမှုကို လက်ကိုင်ထား၍”
အခြေခံအချက်အလက်နှင့် ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အမေးများသောမေးခွန်းများ
ဖောက်သည်များနှင့် မိတ်ဆွေအများအပြားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ပဏာမနားလည်မှုရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်၊ အဆောက်အဦပုံစံထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ စက်ရုံတွင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းအပါအဝင် Monster Wood ထုတ်ကုန်များ၏ အဖြစ်များသည့်ပြဿနာများကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေက သစ်သီးဝလံ...
သစ်လုပ်ငန်းအပေါ် ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းကြား ပဋိပက္ခ၏ သက်ရောက်မှုက မည်မျှကြီးမားသနည်း။
ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းကြားက ပဋိပက္ခဟာ လုံးလုံးလျားလျား မပြေလည်တာကြာပြီ။သစ်သယံဇာတ ပေါများသော နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ယင်းသည် အခြားနိုင်ငံများကို စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ရှိလာမည်မှာ သေချာပါသည်။ဥရောပဈေးကွက်တွင် ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီတို့သည် သစ်သားဝယ်လိုအား ကြီးမားသည်။ပြင်သစ်အတွက်သာမက ရုရှားနှင့်...
အထပ်သား နိုင်ငံတကာ စျေးကွက် အပြောင်းအလဲများ
မကြာသေးမီက ဂျပန်သတင်းအစီရင်ခံချက်များအရ ဂျပန်အထပ်သားတင်သွင်းမှုသည် 2019 ခုနှစ်တွင် အဆင့်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခင်က ဂျပန်၏အထပ်သားတင်သွင်းမှုသည် ကူးစက်ရောဂါနှင့် အကြောင်းအရင်းများစွာကြောင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကျဆင်းလာကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ယခုနှစ်တွင် ဂျပန်အထပ်သား တင်သွင်းမှုသည် ကပ်ဘေးကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုများနှင့် မေးခွန်းများအတွက် အဖြေများ
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်ရေးဖော်မြူလာကို အဆင့်မြှင့်ထားပြီး၊ အနီရောင် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး အထပ်သားသည် ဖီနောကော်ကို အသုံးပြုထားပြီး မျက်နှာပြင်၏အရောင်မှာ နီညိုရောင်ဖြစ်ပြီး ချောမွေ့ကာ ရေစိုခံသည်။ထို့အပြင်၊ အသုံးပြုထားသောကော်ပမာဏသည် 250g၊ ပုံမှန်ထက်ပိုမိုများပြားပြီး ဖိအားပိုကြီးလာသောကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှု...
ပြည်တွင်းမှာ ကပ်ရောဂါ ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်။
ပြည်တွင်းတွင် ကပ်ရောဂါ ထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး နိုင်ငံတွင်းရှိ ဒေသအများအပြားကို စီမံခန့်ခွဲရန် ပိတ်ထားရပြီး၊ ကွမ်တုံ၊ ဂျီလင်၊ ရှန်ဒေါင်း၊ ရှန်ဟိုင်းနှင့် အခြားပြည်နယ်အချို့တွင်လည်း ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်ရန် ရာနှင့်ချီသော ဒေသများ၊ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး...
အမှတ် 183 Xiayantun၊ Shuangyan ရွာ၊ Shanbei မြို့နယ်၊ Qintang ခရိုင်၊ Guigang မြို့၊ Guangxi ပြည်နယ်၊ China